» २४ औँ तामाङ चलचित्र प्रदर्शन दिवस भदौ १६ गते मनाईदै
२४ औँ तामाङ चलचित्र प्रदर्शन दिवस भदौ १६ गते मनाईदै
१३ भाद्र २०७६, शुक्रबार २०:५७
मकवानपुर, १३ भदौ । २४ औं तामाङ चलचित्र प्रदर्शन दिवस यही भदौ १६ गते भक्तपुरमा हुने भएको छ । तामाङ चलचित्र संघ नेपालको आयोजनामा सम्मान तथा बृहत साँस्कृतिक कार्यक्रमको आयोजना गर्न लागिएको संघका अध्यक्ष बिकु थोकरले जानकारी दिनुभयो ।
‘हाम्रो कला हाम्रो पन, तामाङ चलचित्र हाम्रो पहिचान’ भन्ने नाराका साथ भक्तपुरको सूर्यविनायक स्थित शुभकामना पार्टी प्यालेसमा मध्यान्ह १२ बजेपछि कार्यक्रम सुरु हुनेछ । तामाङ चलचित्र प्रदर्शन भएको दिनको सम्झनामा सुरु भएको दिवसका अवसरमा हुने कार्यक्रममा सम्पूर्ण कलाकार तथा चलचित्रकर्मी र चलचित्रप्रेमीहरुलाई सहभागिताको लागि आह्वान समेत गरिएको छ । कार्यक्रममा विभिन्न चर्चित कलाकारहरुको प्रस्तुति समेत रहनेछ ।
स्टेजमै भावुक भए प्रकाश सपुत
दुबईमा यी नेपालीको बब्बाल डान्स्, केटा हो कि केटी छुट्याउनै समस्या
केही महिना अघि चर्चित भाईरल बाल गायक अशोक दर्जी र चर्चित गायक टंक बुढाथोकी सहितको टोली दुबईमा भएको सांस्कृतिक कार्यक्रममा पुगेका थिए । सोही कार्यक्रममा एक प्रवासी नेपालीले बब्बाल डान्स गरेका थिए । उनको गीतमा धेरै युवकले हुटिङ समेत गरेका थिए । उनी युवक हुन् कि युवती ? यो छुटाउन सबैलाई हम्मे–हम्मे पर्यो । तपाईले सक्नुहुन्छ कि ? हेनुृहोस् भिडियो–
दिपकराज गिरीको दुई वटी श्रीमती ?
शिर्षक पढेर अचम्म लाग्यो होला तर यो सत्य हो । नझुक्किनुस् है , यो कुरा कलाकार दिपकराज गिरीको वास्तविक जीवनको बारेमा होईन । उनी वास्तविक जीवनमा आफ्नै श्रीमतीसँग खुशी छन् । यहाँ म कुरा गरिरहेको छु दिपकराज गिरी सहितको टिमको नयाँ चलचित्र ‘छक्का पञ्जा ३’ को ।छायांकनको समयदेखि नै चर्चामा रहेको चलचित्रको ‘पहिलो नम्बरमा’ बोलको गीत साउन १४ गते युट्युबमार्फत सर्वाजनिक गरिएसँगै चलचित्रको कथाका बारेमा समेत कौतहुलता पैदा भएको छ । तर दिपकको दुई वटी श्रीमति देखिएसँगै यो चलचित्र बहुविवाह सम्बन्धी हो कि भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ ।